သင့်ရဲ့ဘလော့သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အဘို့ကြီးသောသတင်းများက Web Widgets
ဒါဟာစာမျက်နှာပေါ်သို့ကူးယူခြင်းအဖြစ်လွယ်ကူစွာနဲ့အတိတ် Code ကိုအမျှင်
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သတင်းဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် website ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အပြေးရရှိပါသည်သင်မူကားနည်းနည်း up ပြုလုပ်မြိန်ချင်တယ်။ တစ်ဦးကကို web ဝစ်ဂျက့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Web ကို Widgets ဘာတွေလဲ?
Web ကို Widgets တွေသင်သည်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်, ဘလော့ဂ်ကိုသို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်သို့ကော်ပီကူးခြင်းနှင့် paste နိုငျသောကုဒ်၏ရိုးရှင်းစွာအနညျးငယျအပိုငျးပိုငျးဖြစ်ကြသည်။ စိတျကူးနီးပါးတိုင်းခေါင်းစဉ်အာရုံစိုက်အခမဲ့အွန်လိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ Widgets တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါက Web Widgets ကိုသုံးပါသငျ့သလော
Web ကို Widgets တွေသင်ဖန်တီးထားသောင့်ပစ္စည်းဖြည့်အကြောင်းအရာကိုပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်စိတ်ဝင်စားထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Blog ကိုဒေသခံနိုင်ငံရေးအပေါ်အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ,, သငျသညျပြည်နယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးအပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့ widget ကထည့်နိုင်သည်။ သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းအားကစားကိုဖုံးလွှမ်းလျှင်, သင်လိုလားသူအဖွဲ့များအောက်ပါအတိုင်းတဲ့ widget ကထည့်နိုင်သည်။ widgets အဖုံးမှကျောင်းသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားသတင်းစာဆရာအဘို့အခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သတင်းအကြောင်းအရာမျိုးကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ငါက Web Widgets ကိုဘယ်လိုသုံးပါသလား?
သင်တို့အပေါ်မှာ-line ကိုကို web Widgets တွေသုံးပြီးအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပြီးကူးယူင်နှင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ် blog ထဲသို့ code များကိုတစ်နည်းနည်း paste လုပ်လိုက်ပါ။ ကနေရွေးချယ်ဖို့အဆင်သင့်လုပ်သတင်း Widgets တွေရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်စဉ်နှင့်အညီ, သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ site ၏ကြည့် fit မှ Widgets တွေစိတ်ကြိုက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အောက်တွင်သင်သတင်း Widgets တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအထဲကအဲဒီမှာအများကြီးပိုပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်သောအရာကိုရှာကြောက်လန့်ဖြစ်ပါဘူး။
ဖြစ်သော CBS သတင်း - ကွန်ယက်အများအပြားအမျိုးအစားအတွက် Widgets တွေပေးထားပါတယ်။
AP သတင်းဌာန - အမေရိကန်ဝါယာကြိုးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်တစ်ဦးက widget က။
The New York Times - သတင်းစာထဲကနေ Breaking သတင်း။
CNN က - cable ကိုကွန်ယက်မှသတင်း။
Fox ကသတင်း - cable ကိုကွန်ယက်မှ Breaking သတင်း။
USA Today - သတင်းစာထဲကနေ Widgets တွေတစ်အမျိုးမျိုး။
USA Today နိုင်ငံရေး
CNN ကနိုင်ငံရေး ticker
နိုင်ငံရေးတိုက်ရိုက် Pulse - နိုင်ငံရေးကိုက်ဘ်ဆိုက်ကနေသတင်း။
CNN ကငွေ - စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်။
USA Today အားကစား
အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် Widgets တွေများစွာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပကြောင်းဝစ်ဂျက်က်ဘ်ဆိုက်များလည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျကို pre-လုပ် Widgets တွေကောက်သို့မဟုတ်ပင်ဖန်တီးသင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Widgetbox - Widgets တွေရာပေါင်းများစွာ၏ဤ site ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲမှရှာဖွေပါ, သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပါစေ။
Google က - အဆိုပါ search engine ကိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက် Widgets တွေများစွာပေးထားပါတယ်။
wordpress - wordpress ဘလော့ဂ်များရှိသူတို့အဘို့အ Widgets ။
Facebook က & Twitter ပေါ်တွင်ငါ့နောက်သို့လိုက်
သင်က Feature ကိုဇာတ်လမ်းများရေးရန်မှသိပါဖို့လိုအရာအားလုံးကို
ဌာနအကြံပေးကောင်စီမကြာခဏ High School တွင်စာတမ်းများ censoring မများအတွက်ပုဆိန်ရင်ဆိုင်ရနိုင်
အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး Sylvester Stallone, Movies
တစ်ဦး Taurus က Man ၏နှလုံးအနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်း
ရွေးကောက်ပွဲ "Élire" ( "Conjugate လုပ်နည်း
အဆိုပါထိပ်တန်းအကောင်းဆုံးတက္ကဆက် Hold'em Poker လက်စွဲ
သမုဒ္ဒရာ Sunfish အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ဤနေရာသို့သွားရန်ဒါက5ချို့ယွင်းမှုများ
ပြင်သစ် "Accueillir" Conjugate လုပ်နည်း (လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်မှ)
ရေကူး Started Get ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းရေကူး
ကို 'တတိယအိမ်ယာ' 'အဘယျသို့ခဲ့သလား
အထည်အလိပ်ပန်းချီ: သင် Started Get ဖို့လိုအပ်ကဘာလဲ
သင့်ရဲ့ဟွန်ဒါပင်မ Relay စုံစမ်းလုပ်နည်း
လျှာကို Twisters: 'Woodchuck' '
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဝိန်း Fort Stanwix ၏ Siege
အကြားအမြင်ရ VS အလိုလို